Shiinaha polyetylen Glyeol 300 PEG 300 warshad iyo soosaarayaasha | Yinuoxin
Codsiyada ugu muhiimsan:Badeecadani waa mid aan sun ahayn, oo aan xanaaq lahayn oo waxay leedahay milim biyo fiican, iswaafajin, saliidayn, adhesion iyo xasiloonida kuleylka. Sidaa awgeed, taxanaha 'PEG-300' ayaa ku habboon in lagu diyaariyo kaabsullo jilicsan. Waxay leedahay iswaafajin ballaadhan oo leh dareerayaal kala duwan, sidaa darteed waa dareeraha wanaagsan iyo xalliyaha waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa diyaarinta dareeraha, sida xalka afka, dhibcaha indhaha, iwm.
Habka xirxirida:50kg durbaan caag ah
Nolosha shelf: Saddex sano
Heerka Tayada: CP2015
Kaydinta iyo Gaadiidka: Badeecadani waa mid aan sun lahayn, olol celisa, sida shixnadaha guud ee kiimikooyinka, la shaabadeeyey oo lagu keydiyay meel qalalan.
Glycol polyetylen glycol waxaa sidoo kale loo yaqaanaa polyetylen oxide (PEO). Polyether-ka toosan waxaa lagu helay giraanta furitaanka polymerization of ethylene oxide. Codsiyada ugu waaweyn ee cilmiga bayoolajiga waa sida soo socota:
1. Xalka muraayadaha indhaha. Nafaqada xalka aqueous polyetylen glycol waxay xasaasi u tahay xiirashada xaddiga bakteeriyada kuma fududa in lagu koriyo glycol polyetylen.
2. Saliid dardaro leh. Dabaysha 'ethylene oxide' iyo polymer uumiga biyaha. Si loo diyaariyo shaxda cadarka ee daroogada biyaha ku milma, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa sida dareeraha acetylsalicylic acid, caffeine, nimodipine iyo daroogooyinka kale ee aan milmi karin ee loogu tala galay cirbadeynta.
3. Bixinta daroogada iyo xambaaraha xambaara enzyme. Markii xalka aqueous polyetylen glycol aqueous lagu daboolay lakabka sare ee kaniiniga, faafinta daawada ku jirta kiniinka waa la xakameyn karaa si loo wanaajiyo waxtarka.
4. Wax ka beddelka dusha sare ee qalabka polymerka caafimaadka. Isku-xirnaanshaha qalabka polymer-ka caafimaadka ee taabashada dhiigga waxaa lagu horumarin karaa xayeysiinta, haynta iyo ku-xirnaanta amphiphilic copolymer ay ku jirto polyetylen glycol dusha sare ee qalabka polymer-ka caafimaadka.
5. Samee filimka ka hortagga uurka ee alkanol.
6. Diyaarinta polyurethane xinjirowga lidka ku ah hydrophilic.
7. Polyethylene glycol 4000 waa calool jilciyaha osmotic, kaas oo kordhin kara cadaadiska osmotic, biyo dhuuqi kara, saxaro jilicsan, kordhin kara mugga, iyo kor u qaadista xiidmaha mindhicirka iyo saxarada.
8. Ilkaha oo hagaajiya. Polyetylen glycol waxaa loo isticmaalay inay ka mid tahay ciladaha ilkaha ilkaha sababtoo ah sifooyinkeeda aan sunta ahayn iyo gellinta.
9. PEG 4000 iyo PEG 6000 waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu horumariyo isugeynta unugyada ama isugeynta protoplast iyo caawinta noolaha (tusaale ahaan khamiirka) qaadashada DNA inta lagu jiro isbedelka. Peg wuu nuugi karaa biyaha ku jira xalka, sidaas darteed sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu xoojiyo xalka.
10. Tijaabada barashada moleculeyaasha borotiinka, waxaan u ekeysiin karnaa jawiga ciriiriga ah ee vivo si loo xaqiijiyo saameynta jawiga ciriiriga ah ee dhismaha borotiinka
Sooc Muuqaalka （25）） ColorandlustrePt-Co HydroxylvaluemgKOH / g Miisaanka jirka Barta adkeynta ℃ Waxyaabaha biyaha （%） Qiimaha PH1% xalka aqueous）
PEG-300 Dareere hufan oo aan midab lahayn ≤20 340 ~ 416 270 ~ 330 - ≤0.5 5.0 ～ 7.0
Hore: Carbopol 940
Xiga: Carbopol 20